‘सर्वेन्द्र खनाललाई मा’र्छु’ भन्थे – प्रहरीकै गो’ली खाए, यस्तो छ गु’ण्डा नाइके साजन गुरुङको नालीबेली – ताजा समाचार
‘सर्वेन्द्र खनाललाई मा’र्छु’ भन्थे – प्रहरीकै गो’ली खाए, यस्तो छ गु’ण्डा नाइके साजन गुरुङको नालीबेली
काठमाडौं । प्रहरीले (शुक्रबार) दिउँसो बालाजु गोलढुङ्गामा गो’ली हानी गु’ण्डा नाइके साजन गुरुङलाई प’क्राउ ग-यो ।
प्रहरीको दाबीलाई आधार मान्दा गुरुङ लामो समयदेखि अप’राधकर्ममा संलग्न भएको देखिन्छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई मात्र नभई प्रहरीलाई नै मा’र्ने सम्मको ध’म्की दिँदै आएका गुरुङ अन्ततः प्रहरीले नै चलाएको गो’ली लागि घा’इते भए र समातिए ।
धादिङको सेमजोङमा जन्मिएका गुरुङले वि.सं. २०७० साल माघ २४ गते नुवाकोटको सामरीका पहलमान गुरुङलाई धा’रि’लो हति’यार प्र’हार गरी ह’त्या गरेको आ’रोप लागेको छ ।
जे’लमा रहेका गु’ण्डा नाइके समीरमान बस्नेतको सहयोगी भनिएका गुरुङले हाल नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई नै मा’र्ने ध’म्की दिएका थिए । त्यतिखेर अ’पराध महाशाखाका एसएसपी रहेका खनालले गुरुङलाई पोखरा न्युरोडको खिचापोखरीबाट वि.सं. २०७२ सालमा समातेका थिए । त्यसपछि गुरुङले आफुलाई फ’साउन खोजेको भन्दै खनालकै ह’त्या गर्ने ध’म्की दिएका थिए ।
व्यवसायीलाई ध’म्क्या’एर रकम असुल्ने गरेका गुरुङ संग’ठित गु’ण्डा’गर्दीमा संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । निजले प्रहरीमाथि नै आ’क्रमणको यो’जना समेत बनाएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
पहलमान गुरुङको ह’त्या गरेपछि गुरुङमाथि क’र्तव्य ज्या’न मु’द्दा लागेको थियो । तर जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै पुनरावेदन अदालतले गुरुङलाई सफाई दिएको थियो । हाल सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसरी समातिए गुरुङ
काठमाडौंको गोलढुङ्गा क्षेत्रमा बसेर आ’पराधिक गतिविधी गरेको सूचना पाएपछि महानगरीय अ’पराध अनु’सन्धान महाशाखा, टेकुको टोली गुरुङलाई प’क्राउ गर्न खटिएको थियो ।
समात्न खोज्दा प्रहरीमाथि नै गो’ली प्र’हार गरेपछि गुरुङमाथि गो’ली चलाउनु परेको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरीले उनको घुँडामा गो’ली हानेको छ ।
गुरुङका साथबाट प्रहरीले पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने दुई राउण्ड गो’ली पनि बरामद गरेको छ ।